Margarekha » तुलसीपुरमा करिब १४ हजार वालवालिकालाई भिटामिन ए खुवाउने
तुलसीपुरमा करिब १४ हजार वालवालिकालाई भिटामिन ए खुवाउने
तुलसीपुर । बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधी खुवाउनका लागि तुलसीपुरमा २ सय १८ महिला स्वास्थ्यस्वंयम सेविका परिचालन गरिने भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको समन्वयमा उपमहानगरका १९ वटै वडामा महिला स्वास्थ्य स्वयंम्सेविकालाई परिचालन गरिने भएको हो । प्रत्येक वडामा सवैलाई पायक पर्ने गरी स्थान तय गरी औषधी खुवाईने भएको हो ।
औषधि खुवाउनका लागि स्वास्थ्य महाशाखाले सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधि पुर्याइसकेको र आज सबै स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुले पाउने पनि वताइएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र १३ हजार ९ सय ७८ जना वालवालिका रहेका छन् । “यो संख्या वढ्न पनि सक्छ यहाँ वाहिरबाट आएर वस्नेहरु पनि छन्” स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. दाहालले वताए ।
भिटामिन ए खुवाउन अपिल
बालबालिकामा भिटामिन ए को कमीबाट हुने रोगबाट बचाउन, रोग प्रतिरक्षाशक्ति बढाउन, बाल मृत्युदर घटाउन अनिवार्य रुपमा भिटामिन ए खुवाउन उपमहानगरवासीमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले आग्रह गरेका छन् । पाएक पर्ने स्थानमा गएर आफना बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाउन उनले आव्ह्वान गरेका हुन् ।